တောင်ကိုရီးယား သတင်းဌာနတွေမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖော်ပြခြင်းခံနေရတဲ့ Victoria လေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု – Swel Sone News
မြန်မာပြည် ကလေးထိန်းကျောင်းတစ်ခုမှာ ၂ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်တစ်ယောက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားမှု (sexual assault ) ခံလိုက်ရပါတယ်။
တရားခံကို အတိအကျခန့်မှန်းဖို့ မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ ၂ နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးရဲ့ ထွက်ဆိုချက်ကိုပဲ နားထောင်ရင်း အချိန်မှီ လုပ်သင့်တာတွေ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။
ဒါကြောင့် ထောင်နဲ့ချီတဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေမြို့လယ်ကောင်မှာ အမှန်တရား စစ်ဆေးချက်တွေဖော်ထုတ်ပေးဖို့ စတင်ဆန္ဒပြကုန်ကြပါပြီ။
သတင်းပေးချက်အရ ရန်ကုန်မြို့မှာ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သား ၆၀၀၀ ကျော်ဟာ နိုင်ငံတော် ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဆန္ဒပြကြပါတယ်။
သူတို့ဟာ အဖြူရောင် အဝတ်အစားကို ဝတ်ထားကြပြီး သူတို့ ကလေးတွေ လုံခြုံရေးအတွက် ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်တယ်။
“Justice to Victoria”
“We don’t want another Victoria anymore.”
ဒီ အမှုဟာ ၅ လပိုင်း ၁၆ ရက်နေ့မှာ ၂ နှစ်အရွယ် ကလေးမလေးဆီမှာ ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မိခင်က ရဲတွေကို တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ၅ လပိုင်းမှာပဲ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် သံသယရှိသူကို ဖမ်းခဲ့ပေမဲ့ သက်သေအထောက်အထား မခိုင်လုံလို့ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေက ” အဖမ်းခံရတဲ့သူဟာ မတရား လူစားထိုးခံရတာ ” ဆိုပြီး အမှန်တရားကိုဖေါ်ထုတ်ဖို့ တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။
ရဲထောက်လှမ်းရေးတွေဟာ အခု ၇ လပိုင်းအထိ တရားခံကို မရှာနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သမီးလေးရဲ့ ဖခင်ကို စာနာပြီး လူမှုကွန်ယက် ကတဆင့် ပြည်သူတွေက စတင်ကူညီ ဝန်းရံပံ့ပိုးလာကြပါတယ်။
ရဲထောက်လှမ်းရေးတွေဟာ သက်သေအထောက်အထား မရှိလို့လွတ်လာတဲ့ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားကို ထပ်ပြီး သံသယရှိတယ်ဆိုပြီး ဖမ်းဆီးပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားရေးက Nickey Diamond (Myanmar Human rights activist ) က ဒီအမှုမှာ အထူးထောက်လှမ်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့လိုတယ်လို့ အကြံပေးပါတယ်။
” ကလေးတွေကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရမှာကျုပ်တို့ တာဝန်ဖြစ်တယ်။ ဒီအမှုမှာ သံသယဖြစ်စရာတွေက အများကြီး” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၃၀ အရွယ် မြန်မာအမျိုးသားတစ်ယောက်ကတော့
” ကျွန်တော့်မှာလည်း သမီးလေးရှိတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ ဒီလိုတွေထပ်မဖြစ်အောင် မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ တရားမျှတမှုကို မျှော်လင့်ပါတယ်။ အပြစ်မရှိတဲ့သူကို ဖမ်းချုပ် အစားထိုးတာမျိုးတွေ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာထပ် မဖြစ်ချင်တော့ဘူး”
ဒီသတင်းကို တောင်ကိုရီးယား YTN သတင်းဌာနက ၇ လပိုင်း ၇ ရက်နေ့က စ ကြေငြာခဲ့ပြီး ” 미얀마 2살 유아 성폭행 ” လို့ Naver မှာရှာကြည့်ရင် သတင်းတွေ အများကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ သတင်းထဲပါတာတွေ အကျဉ်းချုပ်ကတော့ အပေါ်ကရေးတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ Victoria ကိုတော့ ၂ နှစ်အရွယ်လို့ပဲ သတင်းထဲမှာဖော်ပြပါတယ်။
အခုတစ်လော တောင်ကိုရီးယားမှာလည်း ရဲတွေ လဒ်စား နာမည်ပျက်နေချိန်မို့ ဒီသတင်းကို အတော်ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန့် ပြောနေကြပါတယ်။
ကျွန်မတို့ မြန်မာတွေ အရေးကြီးတော့ သွေးနီး စည်းလုံးကြတာ လေးစား ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ အမှန်တရား အမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်ပါစေ။
Source : မရွှေမိုး (ကိုရီးယား )
미얀마 2살 유아 성폭행… “경찰은 아기 진술 듣겠다고 수사 늦춰” 본문듣기 설정
기사입력2019.07.07. 오후 4:01
최종수정2019.07.07. 오후 4:28
မန္တလေးမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်ကတကယ်ကိုလူတွေရဲ့အောက်တန်းကျမှုကိုဖော်ပြတာပဲ
“ငွေမကိုင်ဘူး၊ဖိနပ်မစီးဘူး၊ မိခင်က ငိုပြီးတားတဲ့ကြားက ရဟန်းဝတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ နယ်သာလန်က ဦးအဂ္ဂ”
Victoria လေးအမှုမှ တရားစွဲ ဖမ်းဆီးခံရသူ အောင်ကြီးအား ဒီကနေ့ရုံးထုတ်ပြီး ဇူလိုင် ၂၄ ရက်သို့ ရုံးချိန်း ပြန်လည်ချိန်းဆို
သက်ငယ်မုဒိမ်းကျူးလွန်သူများကို သင်းကွပ်ခြင်း၊ လူမြင်ကွင်းတွင် သေဒဏ်ပေးခြင်းတို့ပြုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ ဦးလှဆွေ
သမီးငယ်​​လေးဗစ်​တိုးရီးယားအတွက် ​ဗိုလ်​ကြီး​ဟောင်းတစ်​ဦးမှ ရဲချုပ်​​အောင်​ဝင်းဦးထံ အမှန်​တရားအတွက်​ ​ပေးစာ